मलेसिया ९२ रनमा अलआउट, नेपाल जवाफी ब्याटिङ गर्दै (लाइभ), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मलेसिया ९२ रनमा अलआउट, नेपाल जवाफी ब्याटिङ गर्दै (लाइभ)
काठमाडौँ । यू-१९ विश्वकप छनौट अन्तर्गत आज नेपाली युवा टिमले आयोजक मलेसियाको सामना गरिरहेको छ । टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको मलेसियाले नेपाललाई ९३ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
मलेसियाको पुरा टिम ३३.५ ओभरमा ९२ रनमा समेटिएको छ । लेजाट डेनियल फिक्रीले वाधिक ३७ रन बनाए भने मुहमद आमिरले १३ तथा हाकिम हरिसनले १० रन बनाए ।
मलेसियाका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन ।
मलेसियालाई सास्तैमा समेट्ने क्रममा नेपाली बलरले उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए । नेपाली बलरकुशल मल्ल र पवन सराफले ३-३ विकेट लिएका थिए । त्यस्तै कमलसिंह ऐरीले २ विकेट लिए भने सागर ढकालले एक विएक्त लिएका थिए ।
नेपालले यसअघि सिंगापुरलाई पराजित गरेको थियो भने युएईसँग बर्षाले प्रभावित खेलमा एक रनले हार बेहोरेको थियो ।
आज प्रतियोगिताका तीन खेल हुने छन् । आज नेपालले मलेसियासँग खेल्ने छ भने ओमानले सिंगापुरविरुद्ध खेल्ने छ । त्यस्तै कुवेतले युएईसँग खेल्दै छ ।
यस प्रतियोगिताको विजयी टिम सिधै एशियाबाट सन् २०२० को जनवरी फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रीकामा हुने यू-१९ विश्वकप क्रिकेटमा छनौट हुने छ ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले अप्रिल १६ मा चौथो खेल ओमानसँग खेल्ने छ । छनौट खेलको अन्तिम तथा पाँचौ खेल अप्रिल १८ मा कुवेतविरुद्ध खेल्ने छ ।
मलेसियामा हुने एशिया स्तरको यू-१९ विश्वकप छनौट खेलका लागि रोहितकुमार पौडेलको कप्तानीमा १४ सदस्यीय टिम खेलिरहेको छ ।